DIGNIIN: BAAXADA KHASAARE EE DHULGARIIR BADEEDKA (TSUMANI) IYO SOOMAALIYA???
Faarax Maxamuud Aw-Cismaan
Madaxa, Ururka Saaxiibtinimada Canada iyo Soomaaliya
Waxaa sida aad la wada socotaan dhawaan ka dhacay badweynta Hindiya dhulgariir gaystay khasaare ba’an oo naf iyo maalba leh, khasaarahaas haba u badnaado dhanka Qaarada Aasiya sida: Indooniisiya, Malayshiya, Siirilaanka, Hindiya, Maldiif, iyo Taylaaan.
Hadaba waxaa caado noqotay hadii belo dhacdo hadba meesha ay ugu waynahay ayaa hesha dareenka dadka iyo midka saxaafadaba, sidaa awgeed waxaa iska caado ah in la ihmaaliyo ama la iska indho tiro meelaha kale ee khasaarooyinku ka dhaceen maadaama belo ka wayn ay ku habsatay meelo kale waa marka loo eego cadadka dadka ku geeriyooday iyo khasaaraha burbur iyo baaba ee ay musiibadaani keentay’e.
Sidaa awgeed maadaama aanu Soomaali ahaan ka midnahay dadka ay masiibadaani waxyeelaysay, maadaama aan saxaafadaha aduunka ka hadlin waxyeelada uu dhulgariirkaan iyo fatahaada badeed u gaystay xeebaha Soomaaliya gaar ahaana kuwa badweynta Hindiya, waxaa qofkasta oo Soomaali ah ay saarantahay mas’uuliyad ah in uu arintaan u istaago, haday ahaan lahayd sheegisteeda, haday ahaan lahayd gacan ka geesashadeeda, iyo ka hadalkeedaba.
Waxaa fatahaadaan badeed ku nafwaayay Kaluumaysto aad u farabadan kuwaas oo ay musiibadaanu kula kulantay badwayn iyagoo saaran doonyo aan lahayn awood ay isaga celinkaraan baaxada hirkaani watay taas oo lagu qiyaasay inuu dherer ahaan ahaa 400 oo mitir, waxay musiibadaani dhamaan baabi’isay firinjeeradii (talaajadihii) kaluumaysadata soomaaliyeed ay ku kaydsan jireen kaluunka iyo aargoosatada (frozen fish and Lobster) waxay bada raacisay dhamaan laashashkii ama doonyihii kaluumaysi (fishing boats), waxay burburisay dhamaan aqaladii magaalooyinka xeebaha ah.
Khasaarahaani wuxuu isugu jiraa mid naf iyo maalba, dhaawaca ay gaysatay musiibadaanina way kala badsadeen magaalooyinka xeebaha ah ee dalka Soomaaliyeed. Dhaawada ugu wayni wuxuu ku dhacay xeebaha u dhexeeya Raas Gardafuul ilaa Hobyo.
Waxaa dhamaan tirtirmay aqaladii ku oolaa magaalada Raas-Xaafuun oo ahayd gacan (golf) dhexgala bada kaas oo markii badu caaridana ay gawaaridu geli jirtay magaalada marka ay bada soo buuxsantana ay magaaladu noqon jirtay jasiirad oo kale. (waa sida xeebtii jaziira iyo qabriga Gendershee).
Magaaladaan oo ah magaalo qadiim ah, magaalo ganacsiga kaluumaysiga caan ku ahayd kuna taala meel Istaraatiijik ah marka loo eego marinka gacanka xaafuun iyo inta u dhaxaysa soqodara, halkaas oo ah marinka ay maraan maraakiinba isaga gooshta Afrika, Aasiya iyo Dunida inteeda kale.
Hadaba waxaa halkaasi ku guryo waayay dad gaaraya ilaa 8000 oo qof waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 100 qof dhaawada ka badan, hantida dhaqaale iyo khasaaraha maal warkiisaba daa.
Waxaa kaloo waxyeelo aad u wayni gaareen dhamaan magaalooyinka saaran xeebaha bada Hindiya sida Baargaal Hurdiyo, Bandarbayla, Eyl, Garacad, Hobyo, Mareeg, Cadale, Xamar, Marka, Ceel Axmed, iwm.. Dadka guud ahaan marka la isku daro Soomaaliya oo dank u nafwaayay waxaa ilaa hada la xaqiijiyay 200 waxaa ilaa iminka la’layahay kaluumaysato gaaraysa ilaa 60 , dadka ku baro kacay ama ku guryo beelay waxay gaarayaan ilaa 60, 000 oo qof.
Waxaa nasiib daro ah in inagii oo khasaaradaani nagu habsatay aynaan qaylo dhaan iyo mucaawino waydiisan caalamka balse ay inoo hadlayaan ajaanib kuwaas oo caalamka ku dhaleecaynaya sida ay u ihmaalinayaan baaxada waxyeelo ee musiibadaan iyo Soomaaliya, dadkaasna waxaa ka mid ah Jan Egeland oo ah Xiriiriyaha xaaladaha degdega ah ee UN-ta.
Hadaba waxaanu ku talinaynaa in dhamaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibada jooga ay ka hadlaan arintaan iyagoo adeegsanaya saxaafada la qoro iyo mida la iskala hadloba, iyagoo markaasi ku baraarujinaya shacabweynaha wadamada ay joogaan si ay dadka ku baro kacay ama ku cayroobay musiibadaan ay u helaan musaacado dawo, raashin, hoy, iyo mid taageero dib u dhis iyo gargaar dhaqaale intaba.
Sidoo kale jaaliyadaha Soomaliyeed waa inay ugu taba rucaan walaalahood dhamaan wixii ay awoodaan sida kaalmo lacageed (fundraising), mid wakhti iyo xirfadeedba.
Shacabweynaha Soomaaliyeed ee dadka gudihiisa ku sugan guud ahaan gaar ahaana ganacsatada waxaan u soo jeedinaynaa inay gargaar la gaaraan walaalahooda ay musiibada rabaaniga ahi ku habsatay, sida taageero raashin, biyo nadiif ah, teendhooyin iyo qalabka dhismaha.
Waxaanu hanbalyo u soo jeedinaynaa Ra’iisal wasaaraha Jamhuuriyada Fedaraalka ee Soomaliya Dr. Geddi sida xilkasnimada leh ee uu arintaan uga qaybqaatay isagoo khibrad u leh arimaha gargaarka, isagoo caalamka u sheegay waxyeelada xeebaha soomaaliya guud ahaan ka hadlay, iyo weliba sida geesinimada leh ee uu wakhtigiisa qaaliga ah ugu huray inuu booqasho ku kala bixin doono goobaha waxyeelooyinkaani u badan yihiin.
Waa talaabo fiican oo ku dayasho mudan , waa xilkasnimo, taas oo ay abaalweyn ugu hayn doonaan shaqabka waxyeeladu gaadhan marka ay arkaan Ra’iisal wasaarahoodii oo booqanaya laha qaybsanaya dhibaatada Rabaaniga ah ee ku habsatay.
Anagu hadaanu nahay ururka Isku xirka iyo Saaxiibtinimada Canada iyo Soomaaliyana Arintaan iyo kuwa la midka ah waa waxa aanu u taaganahay wax ka qabadkeena, wixii awoodayada ahna waanu u istaagi doona gacan ka gaysashadeeda, mar hore ayaanuna gudo galnay sidii aanu qayb uga noqon lahayn gargaarka arintaan.
Warar Goosgoos ah:::